Iwe unoda kugumisa kusagadzikana kunowedzera iwe uye iwe hauzivi kuti ungazviita sei?
Manzwiro akaipa anorwadza isu neavo varipoteredza.
Kusagadzikana kunokwanisa kuchinja zuva rakasvibira kuva usikumare uye kunogona kuva kudzvinyirira, kushushikana kana kunyanya kuipa ...
Nokuzvirega iwe uremerwe nemanzwiro aya, iwe unorega hasha dzikutungamirire uye utye mikana yekufara muupenyu hwako, zvose unyanzvi uye wega.
Kunyange nokuda kwehupenyu hwehupenyu hwakanaka, hakuna munhu anokwanisa kugadziriswa nemasimba aya akaipa.
Kusangana kwachiremba wemazino? Inobvunzurudzo yebasa inogadzirirwa masikati ano? Kuongorora kudarika? Mifungo yedu inofanotaura kuti yakaipa uye mamiriro ezvinhu aya anogona kukurumidza kukurumidza kuzvidya mwoyo.
Kukwanisa kupukunyuka kusagutsikana chinhu chikuru chekugadzirisa unyanzvi uye kuzvikudza.
Mhinduro yacho haigoni kuwira kubva kudenga kana kubva kune imwe nyika, iri mauri.
Usamirira imwezve, tsvaga muvhidhiyo iyi ye 4 min, zvigadziriswe uye mazano anogadzirisa kukanganisa kwekusagadzikana muupenyu hwako hwezuva nezuva ..., uye zvose izvo, mune zvishoma 5 points:
1) Kuonga : unhu hunokosha hwehutano hwako uye unyanzvi!
2) Mafungiro asina kunaka : ona uye uzvidzivirire kubva pamafungu asina kunaka!
3) Kukwezva : Mhedziso dzisina kunaka dzinokanganisa kusava nehanya, kuita.
4) Externalization : inonyatsozivikanwa, kutaura zvakajeka mumuromo sekunyora kunobvumira kuenda mberi uye kuchinja peji. Funga nezvekubvisa zvose izvi simba risina simba rinokurira iwe.
VERENGA Kurumidza kuwedzera mararamiro ako ekubudirira kusvika zviri nani kusvika pane zvinangwa zvako.
5) Kuonekwa : Fungidzira mamiriro ezvinhu akanaka. Nzvimbo, nzvimbo, mamiriro ezvinhu ... zvirege kuzvifunga iwe uzviite zvakanaka.
Utano hwako hunokosha uye hukuru hwekuvandudza hukama hwako nekuremekedzwa.
Kubva Nenzira Yakaipa-Zvidzivirire Nezvakaipa Mavhinga May 11th, 2020Tranquillus
pashureShoko Mazano Pakutanga Chikamu-Chinhu Chine Zvokudya Zvegoridhe
zvinoteveraTuto.com: Zvidzidzo Muhutano Kudzidza Kuti Udzidzise MuNzoro Dzidzo.